Iyo Webhu Yekusimudzira Triangle | Martech Zone
Iyo Webhu Yekusimudzira Triangle
Chitatu, November 6, 2013 Chitatu, November 6, 2013 Douglas Karr
Zvese zvibvumirano zvedu nevatengi vedu zviri kuenderera mberi mwedzi wega wega. Kazhinji kacho isu tinoteedzera yakatarwa chirongwa uye tinenge tisingambo vimbise mutsara wenguva Izvi zvinogona kutaridza kutyisa kune vamwe asi nyaya ndeyekuti chinangwa hachifanirwe kunge chiri zuva rekuburitswa, chinofanirwa kunge chiri mhedzisiro yebhizinesi. Basa redu nderekutengera vatengi vedu mhedzisiro yebhizinesi, kwete kutora mapfupi kuita mazuva ekutanga. Sezvo Healthcare.gov iri kudzidza, ndiyo nzira inozoendesa kune zvisipo zvinotarisirwa.
Kuedza nekuchengetedza mapurojekiti evatengi panguva, isu tinopatsanura zvinodiwa kuti zvive nazvo (kusangana nemhedzisiro yebhizinesi) uye zvakanaka kuva nazvo (sarudzo dzekuwedzera). Isuwo hatimbo rongedzere kupedzisa panguva yekusunungurwa sezvo tichiziva kuti pachagara paine shanduko dzinodiwa.
Robert Patrick ndiye CEO we PhD Labs, iyo agency inogadzira, inovaka uye inotangisa mawebhusaiti emakambani mazhinji epamusoro Fortune 500. Robert anga achichengeta tabo pamatambudziko ayo Healthcare.gov yapinda mairi uye yakapa zvishanu zvikonzero zvakakosha zvekutadza kuvhurwa.
Usambofa wakambotyora iyo Nguva, Mutengo & Feature Gadza mutemo. Funga nezve izvi sekatatu, unofanirwa kusarudza poindi imwe kuve wakasimba uye mamwe maviri akasiyana. Munyika ino, chero chero chinhu chinogona kugadzirwa chero paine nguva yakakwana nemari. Nekudaro, chero munhu anovaka webhu kunyorera anofanira kusarudza, kumberi, inova inonyanya kukoshesa. Izvi zvinogadzika matauriro uye tarisiro yekuti purojekiti inofanira kutanga sei. Semuyenzaniso,
Inofanirwa kuvhurwa kamwe chete zvakatarwa maficha zvaitwa (mari uye nguva zvinosiyana).
Inofanirwa kuvhurwa nekukurumidza (mari uye maficha zvinosiyana).
Inofanirwa kuvhurwa ine bhajeti mupfungwa (nguva uye maficha zvinosiyana).
Kutanga ne tambo yekupedzisa mupfungwa kwete panzvimbo yekutanga. Zvishandiso zvewebhu zvinofanirwa kuonekwa seprojekti ichaita kutanga ndokuzo shanduka. Kuvaka izvo zvakakosha uye zvinosungirwa nhasi nekukura uye shanduko mupfungwa zviri kugara zviri nani pane kuvaka uine chinangwa chekupedzisa pakutanga.
Vatengesi vakawandisa kubatanidzwa. Izvo zvataurwa kuti webhusaiti yeObamacare yaive neinosvika makumi mashanu nemashanu vatengesi vanobatanidzwa. Kuwedzera vatengesi vazhinji kune chero chirongwa kunogona kunge kuri kutsvedza. Unogona kuvimbisa kuti pachave nenyaya nefaira rekushandura, hunyanzvi faira kusawirirana, hunyanzvi maonero kusawirirana, kusiyiwa kweprojekiti, uye rondedzero inoenderera nekuenderera mberi. Fungidzira dai taive nemaseneti makumi mashanu neshanu basa rimwe nerimwe rekugadzirisa chikamu chedambudziko rese.
Information Architecture kwete kutorwa zvakanyanya. Kazhinji, masangano makuru anokumbira vatengesi kuti vaendese bhidha pane RFP uye vasvetuke zvachose pamusoro peNzira yeRuzivo rwekuvaka ichisvetukira mukusimudzira pasina kunzwisisa kana kubvumirana pachiyero. Ichi chikuru, chakashata, kutambisa nguva, kurasikirwa nemari, kukanganisa. Iyo yakakosha zvakanyanya kune dhizaini sezvakawanda zvekushandisa sezvaunogona kumberi uye kugadzirira kushinga uye kusanduka pazvinhu zvisingakwanisike kutarisirwa zvakanaka usati watanga kuzvimisikidza (izvi zvakafanana nekuvaka imba isina mapurani). Vatengesi vakafanirwa kupererwa nebhajeti uye vanotanga kucheka makona kana izvi zvisina kuitwa nemazvo.
Kwete nguva yakakwana ye Quality Panga. Zviri pachena kuti uku kwaive kudonha kukuru kune kuvambwa kweHealthCare.Gov. Ivo vanga vachishanda pazuva rakaomarara rekuvhura (nguva ndiyo yakatarwa kusiyanisa kwetriangle mune ino kesi) uye maficha uye bhajeti inofanirwa kunge yakagadziridzwa kusangana nezuva rekuvhura nenguva yeiyo chaiyo Asshuwarisi Yakavakirwa muchirongwa. Uku kukanganisa kukuru uye pamwe kunodhurira vanhu vazhinji mabasa avo.
Tags: mutengokukanganisazvinhutambo yekupedzisazvehutano.govruzivo rwekuvakwakuvimbiswa kwehutanotanga mutsaranguvatriangleVatengesi
Gwaro reSoDA ra2013 - Bhuku 2
B2B Vatengesi Vanowana Kubudirira Nezviri Kushambadzira